मन्त्री बन्ने बनाउने बिषयमा मजाक नगरौ भन्दै योगेशले भने- ओली संग टाढा बसेर नजिक हुन खोजेको हुँ « हाम्रो ईकोनोमी
मन्त्री बन्ने बनाउने बिषयमा मजाक नगरौ भन्दै योगेशले भने- ओली संग टाढा बसेर नजिक हुन खोजेको हुँ
२०७५ जेठमा गज्याङगुजुङ अवस्थामा पार्टी एकीकरण घोषणा भयो। त्यसले पार्टीमा जति उत्साह ल्याउनुपर्ने थियो त्यो भएन। तर पार्टी एकीकरण हुनु भनेको राम्रो हो। एकीकरण त हुनैपथ्र्यो। त्यसले आमजनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो। एकीकरणपछिको यो एक वर्षमा पार्टी निर्माणमा जति ऊर्जा प्राप्त हुनुपथ्र्याे त्यो हुन सकेन।
त्यसले तहगत अवस्थामा पार्टीभित्र निराशा र अन्योल देखिन्छ। पार्टी एकीकरण प्रक्रिया हेर्दा हामी गलत दिशामा छैनौं। यसले गति मात्रै नलिएको र सही ट्र्याक नसमातेको हो। एकीकरणपछि हामीले जुन क्षति व्यहोर्‍यौं त्यो परिपूर्ति हुने गरी अगाडि जानुपर्छ।
पार्टी एकीकरणपछि यसभित्रको युवा पुस्ता ओझेलमा परेको बूढाहरूको चंगुलमा पार्टी परेको जस्तो देखिन्छ नि ? पार्टी एकीकरण गरेर यहाँंसम्म ल्याउन दुवै पार्टीका आमसदस्यहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यति हुँदाहुँदै निर्णायक ठाउँमा अग्रभागमा भएका नेताकै भूमिका हुन्छ। दुवै पार्टीका नेताहरूको कुरा गर्दा एकीकरणमा पाँच सातजनाको भूमिका देखिन्छ। अझ ठोस ढंगले भन्नुपर्दा यसमा दुवै अध्यक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। दुई अध्यक्ष एकीकरणमा सहमत नभएको भए यति चाँडै हुने थिएन। केही समयपछाडि धकेलिने थियो। किनकि तलका परिस्थितिले दुईवटा अध्यक्षलाई पार्टी एकीकरणबाट अलग जान दिने थिएन। तर दुईवटा अध्यक्ष यसमा सहमत हुनुभयो र सहज बनाउनुभयो।
दफा १मा के भन्छ भने सेनापरिचलनका लागि सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिका पठाएपछि त्यो अनुमोदन हुन्छ। २ र ३ मा कुनै विशेष परिस्थितिमा सुरक्षा परिषद् बैठक हुन नसके पनि सेना परिचालन हुनुपर्‍यो भन्ने छ। हाम्रो सन्दर्भमा सेना परिचालन भनेको राजनीतिक उद्देश्यले मात्रै बुझाउन खोजिएको छ तर त्यो होइन। कुनै समूहमाथि दमन गर्ने भन्ने अर्थमा सेना परिचालन भन्ने बुझाउन खोजिएको छ त्यो बिल्कुल होइन।मानाैं, कुनै ठ्लो प्राकृतिक प्रकोप भयो भन्ने अर्थमा हो त्यो । वैशाख १२ गते नेपालमा त्यत्रो भूकम्प गयो त्यस बेला कुन सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर उद्धारमा सेना परिचालन गरेको हो? त्यसबेला केही सेकेन्डमै सेना मैदानमा निस्कनुपर्‍यो नि । विधेयकमा प्राकृतिक प्रकोप बाढीपहिरोमा भन्ने शब्द थपिदिए पुग्छ। नेपालसमयबाट